Orinasa azo ampiasana orinasa mpamokatra orinasa, orinasa mpamokatra sakafo sy zava-pisotro aorinan'ny serivisy fanohanana ara-teknika, tsy misy serivisy, Fanohanana an-tserasera, faritra ialana, fikojakojana sy fanamboarana ny serivisy eo an-toerana Toerana misy toerana tsy misy toerana misy toerana misy toerana vaovao niaviany Shandong, China Brand Name Shenlong TOSIKARATRA Voltage namboarina Manome hery hamerenana ny haben'ny lanjany hatramin'ny famerenana ny refy habe (L * W * H) hatramin'ny hamerenanao ny haben'ny Certification ISO, Warranty CE 1 Taona aorian'ny fivarotana S ...
Mpivarotra varotra mixer mixer mixer tsara indrindra eto amin'ny indostrialy
Ny fitaovana kettle vita amin'ny lasitra dia vy tsy misy fangarony ary ny sakafo mampihetsi-po dia sakafo vita amin'ny vy tsy misy fangarony ary voalamina; Ny rafi-pitabatabana dia ny fitambaran'ny fihodinana sy ny revolisiona ary ny tahan'ny fiara dia ny tahan'ny fiara tsy mitongilana, manome antoka ny fikorontanana fanamiana isaky ny teboka ao anaty vilany. Ity masinina ity dia nanosika hidy hidradradradra hanodinana ny sandry mampihetsi-po, hisorohana ny famoahana ny mpamporisika sy ny famonjena mpiasa. Ny governora tsy miovaova tsy misy fatra dia afaka mampifangaro sy manafana ny vokatra izay mitovy viscous mitovy, izay mitsitsy angovo ary miasa mora.
Fitaovana mandoto planeta mandeha ho azy avo lenta
Toeram-pamokarana indostria mpamokatra indostrialy vaovao azo ampiharina, orinasa mpamokatra sakafo sy zava-pisotro aorinan'ny serivisy fanampiana ara-teknika Video, Fanohanana an-tserasera, kojakoja, faritra fikolokoloana sy fanamboarana ny serivisy eo an-toerana Toerana misy an'i Vietnam Nam, Toerana fampirantiana ao Indonesia Vietnam Nam, Toerana niaviany tany Shandong, anarana marika China Warranty Fitaovana fandrahoan-tsakafo Shenlong karazana 1 taona Aorian'ny varotra dia nanome ny fametrahana saha, fananganana komisiona sy fiofanana amin'ny sehatry ny Cannery, ...
valiny fanodinana rano mandeha ho azy ho an'ny indostrian'ny sakafo sy zava-pisotro am-bifotsy
Water Cascading Retort / Autoclave dia ny ranonorana amin'ny rano eo ambonin'ny fonosana vokatra hamindrana ny hafanana, ity karazana retort ity dia mety ho an'ny tinplate lata, tavoahangy vera, tavoahangy plastika, sns.
Fanamafisana ny etona Autoclave Retort ho an'ny sardinina sy famerenan'ny sakafo vita amin'ny canona
Steam Retort / Autoclave dia ny fanamorana ny fihinanam-bary amin'ny etona mahavoky; koa mba hahazoana fizarana hafanana tsara, alohan'ny hamindroana dia mila manana ny fizotran'ny rivotra. Ny retort Steam dia natao indrindra ho an'ny hena am-bifotsy, trondro am-bifotsy, sns.
Hot Sale Steam Hot Water Retort Sterilizer Autoclave Prix ho an'ny Canning Food Retort no fitaovana ampiasaina amin'ny fanamorana ny sakafo am-bifotsy amina asidra ambany, ny hafanana dia mihoatra ny 100 life ary ny talantalana dia mihoatra ny 6 volana. ny mari-pana mamaly sy ny fotoana dia napetraka araka ny vokatrao. 1.Our retort material: ampiasao SS304 na 316, retort flanges ary loha izay nampiasainay no kalitao avo indrindra any Shina. Rafitra fanaraha-maso 2.Control: ny rafitra fanaraha-maso SIEMENS dia manome antoka fa ny mpanjifa dia afaka mahita ny rojom-panolorana amin'izao tontolo izao ...
Fivarotana mafana autoclave famerenana sakafo ara-barotra ho an'ny trondro am-bifotsy
Retort no fitaovana ampiasaina amin'ny fanamainana ny sakafo am-bifotsy am-bifotsy asidra, mihoatra ny 100 temperature ny maripana ary mihoatra ny 6 volana ny talantalana. ny mari-pana mamaly sy ny fotoana dia napetraka araka ny vokatrao. Ny toerana sahaza anay sy ny fifehezana kalitao tsara dia tsara amin'ny dingana rehetra amin'ny famokarana dia ahafahanay manome antoka ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny IOS Certificate China Steam Spray Retort Sterilizer Autoclave ho an'ny Jar Jar, Ankehitriny dia nanitatra ny orinasa madinidinika tany Alemana, Tur ...